Sis saameyn ku yeeshay garoonka diyaaradaha Istanbul, Diyaarado ayaa ku soo booqday Daqiiqado hawadu ku jiraan | RayHaber
HomeTURKEYGobolka Marmara34 IstanbulFog wuxuu saameeyay garoonka diyaaradaha Istanbul, Diyaarado ayaa lagu soo kormeeray Hawada daqiiqado
20 / 11 / 2019 34 Istanbul, GUUD, Garoomada, WADADA, Headline, Gobolka Marmara, TURKEY, VIDEO
Madaarka istanbul ee fog fog
Diyaarado in ay ganacsi sameeyaan daroogada oo shaqeyneysa subaxnimadii Talaadada ee gegada diyaaradaha ee Istanbul waxay qaadatay waqti dheer socdaalka hawada. In kasta oo ay daahday, dhammaan diyaaradaha waxay si nabad ah ugu soo deggeen garoonka diyaaradaha.
Marka loo eego AirportHaber, tirada duullimaadka IA219 duullimaadka Necef-Istanbul, lambarka duulista ee SV3259 duullimaadyada Madiina-Istanbul, Tarom ee tirada duullimaadka ee BuXrest-Istanbul iyo tirada duullimaadka T261 duulimaadkaMedine-Istanbul, diyaaradda Turkmenistan Airlines. waxay ahayd inay tuuraan.
Qandho dartiis oo wax ku ool ah gaar ahaan saacadaha subaxa hore, aragtida duulimaadyada ee garoonka diyaaradaha Istanbul waxay ku sii yaraaneysaa mitirka 5 waqti ka waqti; Sida ku cad macluumaadka laga helay AirportHaber gadaal gadaal looga riixey howsha weheliso aniga ilasoso. Diyaarad ma soo dhaweyn karin jalaatada sababtoo ah ceeryaanta waxaa loo gudbiyay gobolka loo yaqaan Waqooyiga Apron.
Waxaa la sheegay in aragtida garoonka diyaaradaha ee Istanbul ay hoos ugu dhacday mitirrada 20. Ilaahay ha u fududeeyo shaqaalaha garoonka diyaaradaha, duuliyeyaasha iyo saraakiisha duulista pic.twitter.com/huvasnxnumxhxnumxl
- Cali KIDIK @alikdk November 19, 2019
Diyaaraduhu kuma soo degi karaan mar kale garoonka diyaaradaha Istanbul,,.
Isaga oo ku dhejinaya baabuurka Fog Cable Car ee Denizli '
5 Cable Car Wagon oo ku taal Ski Resort ee Alps…
Tram ee Izmir laakiin aan Traffic
Atatürk ee Duullimaadka Diyaaradaha Magaalada Istanbul…
Gaarigiisa ayuu dhigtey wadada laamiga ah ee Bursa wuxuuna booliska u sheegay…
Diyaaradda Medina Istanbul
Duulimaadyada Najaf ee tagaya Istanbul